Jubland oo shaacisay liiska xubnaha aqalka sare u tartamaya
9th October 2016 by admin2 Leave a Comment
Maamulka Jubaland ayaa shaaciyay xubnaha ugu tartamaya aqalka sare waana:
Galmudug oo ku dhawaaqaay liiska u sharaxa Aqalka Sare
Maamul goboleedka Galmudug-Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay magacyada xubnaha ku metelaya aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
hoos ka akhirso
liiska Xubnaha Aqalka Sare Puntland ay soo gudbisay
8th October 2016 by admin2 Leave a Comment
waxaa Hada lagu dhawaaqay liiska tartamaayasha xubnaha Aqalka sare ee Puntland waana:
Cumar cabdirashiid. Vs Aamina Aadan
Yaasiin Cabdi Seed Vs Seynab Xaashi Ciise
Cabdiraxmaan Faroole, Cabdi Mahadi
Siciido Xassan Cismaan, Axmed Tigaana, Siciid Maxamuud Aadan, Maxamed Maxamuud bile
Hodan Maxamuud Cismaan, Axmed Maxamed Maxamuud, Caydiid Saleebaan Xaashi, Axmed Maxamuud Faarax.
Abdirisaaq Juurile, Hodan Ismaaciil Cilmi
Maxamuud Axmed Maxamuud, Faadumo Siciid Maxamed
Mahad Cabdale Cawad, Maxamed Siciid Xirsi Moorgan, Cabdixakiin Axmed Xaashi
Mahad Daahir Sheekh Nuur, Cabduqaadir Shaaciye, Cabdixakiin Axmed Xaashi
Cali Ismaaciil Cabdi Giir, Shukri Cabdulaahi Maxamuud, Faraxaan Cali Xussien
Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere, Faarax Cawad, Siciid Maxamuud Cali.
Maxamuud Axmed Maxamuud, Faadumo Siciid Maxamed.
Fadlan ka qayb qaado Dib udhiska Isbitaalka Gaalkacayo
18th September 2016 by admin2 Leave a Comment
Dhammaan dadweynaha Soomaliyeed Gaar ahaan reer Puntland waxaa lagu wargalinayaa in la bilaabay dib u dhiska Isbitaalka guud Magaalada Galkacyo, kaa soo ku burbur weyn kasoo gaaray qaraxii ka dhacay Magaalada Galkacyo waxaana burburay qaybo badan oo ka mid ah Isbitaalka.
Waxaa lasameeyay gudiga dib u dhiska isbitaalka Galkacayo oo ah gudi madaxbanaan kana kooban 19 xubnood ayna ka mid yihiin Isimo, Culumo, Aqoonyahano, Ganacsato xushmad ku dhexleh Bulshada iyo Xubno ka socda Maamulka Dowladda.
Guddigu shaqadiisu waa dib u dhiska Isbitaalka guud ee Galkacyo, loona qorsheeyay inuu noqdo mid cusub oo casri ah waxuuna Guddigu aruurinayaa dhaqaalaha iyo tubaracaadka dad waynaha khayrka jecel dal iyo dibad.
Guddigu wuxuu ku baraarujinayaa dad waynaha reer Puntland iyo kan Soomaaliyeed in howshaas ay kawada qayb qaataan Maal, Muruq iyo Maskaxba si loo helo Isbitaal casri ah oo daboola dhammaan baahiyaha Caafimaad.
Hadaba Dhamaanteen aanu ka qaybqaadano dib u dhiska Isbitaalka guud ee Galkacyo.
Sahal Number ku dir:- 6791977
Gudiga Dib u dhiska Isbitaalka Guud ee Galkacayo
Fadlan ka qayb qaado Dib udhiska Isbitaalka Galkacayo
Fadlan ka qayb qaado Dibu dhiska Isbitaalka Galkacayo
Gudigu wuxuu ku baraarujinayaa dad waynaha reer Puntland iyo kan Soomaaliyeed in howshaas ay kawada qayb qaataan Maal, Muruq iyo Maskaxba si loo helo Isbitaal casri ah oo daboola dhammaan baahiyaha Caafimaad.
Wafdi uu hugaaminyo Ra’iisul wasaaraha DFS oo ka soodagay Garowe
25th March 2016 by admin2 Leave a Comment
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay weheliyaan Madaxweyne ku-xigeenka Eng. Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa Maanta 25-March-2016 waxay kusoo dhoweeyeen Garoonka Kanooko ee duleedka Garoowe Ra’iisul-wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Wafti ballaadhan oo uu hoggaaminayey.
Soodhoweynta Ra’iisul-wasaaraha ayaa waxaa ka qayb qaatay Wasiiro, Xildhibaano iyo saraakiil ciidan, waxaana intaasi kadib loosoo gudbiyey waftiga Qasriga Madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe halkaas oo ay Madaxweynaha iyo Ra’iisul-wasaaruhu si wada jir ah ugula hadleen warfidiyeenada.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in ujeedka socdaalka Ra’iisul-wasaaruhu ku qotonto sidii Dawladda Puntland iyo Dawladda Federaalka Soomaaliya ay uga wada hadli lahaayeen geeddi-socodka Nabadda Soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ah ee uu ku jiro dalka Soomaaliya.
“waxay noogu yimaadeen inaanu kawada hadalno maraxadda kala guurka ah ee Soomaaliya iyo geeddi-socodka nabadda Soomaaliya sidii loosii ambaqaadi lahaa oo ay Dawladda Puntland iyo Dawladda Federaalku uga wadashaqayn lahaayeen in Soomaaliya uu ka dhoco isbedel u hiilinaya Mustaqbalka Soomaaliya” ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Sidoo kale Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in ay ra’iisul-wasaaraha kawada hadli doonaan arrimaha Amniga dalka oo ay qayb katahy guulihii ciidamada Puntland ay kasoo hooyeen duullaankii sharwadayaasha alshabaab ay kusoo qaadeen Puntland sidoo kale Arrimaha dhaqaalaha dalka ayuu sheegay Madaxweyne Gaas in ay kawada hadli doonaan.
Ra’iisul-wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa bogaadiyey guulihiii taariikhiga ahaa ee shacabka iyo ciidamada difaaca Puntland iyagoo is garabsanaya ay kasoo hooyeen kooxihii sharwadayaasha ahaa ee Puntland kusoo duuley, waxaana uu intaasi sii raaciyey in ay gacan kageysanayaan wax kaqabashada ciidamadii halgamayaasha ahaa ee Puntland ee dhaawacyadu kasoo gaadheen dagaalkii ay sharwadayaasha alshabaab kaga sifaynayeen Puntland.
Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ay Puntland kawada hadli doonaan masiirka ummadda Soomaliyeed iyo sidii looga bixi lahaa xilliga kala guurka ah ee uu kujiro dalka Soomaaliya, waddankana loogu jihayn lahaa meel wanaagsan.
Puntland oo soo bandhigtay Hub iyo maxaabiis lagu qabtay dagaalkii aaga garacad.
24th March 2016 by admin2 Leave a Comment
Dawlada Puntland ayaa soo bandhigtay sawiro maxaabiis iyo hub laga soo qabtay dagaalkii aaga garacad ku dhexmaray Alshabaab iyo Puntland
Waxaa goob joog ka ahaa Madaxwaynaha Iyo wasiiro Puntland waxaana lagu sheeciyay khasaaraha dagaalka ka soo gaaray alshabaab lagunsoo gabagabeeyay dagaal socday mudo asbuuc ah.
Puntland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu soo dhammaadey howlgalkii ay ugu magac dareen DANAB kaasoo ka kala socdey Garmaal iyo Garacad.
Dhimashada kooxdii soo duushey waxay dowladdu ku sheegtay dhanka Garacad 208 halka maxbuusna loo qabtay 64.
Dhanka Suuj 71 Halka maxbuus ahaanna loo qabtay 44. Tirada dhimashada ayay tahay guud ahaan 279 dhanka Al-Shabab laga dilay.
Dhanka ciidanka waxaa kaga dhigtey howlgalkii Garacad 20 waxaa kaga dhaawacmay 60.
Al-Shababta tiradooda waxay ahayd 600 intii kale way carartey
ninkii ugu horeeyay oo sameeyay aalada emailka iyo calaamada @ oo geeriyooday
8th March 2016 by admin2 Leave a Comment
Raymond Tomlinson ayaa ah ninkii ugu horeeyey oo sameeyey aalada loo yaqaan Emailka ee qoraalada la isku dhaafsado isla markaana ah ninkii alifay calaamada ( @ ) ee loo isticmaalo ciwaanada Emailada.
Khabiirkan ku takhasusay computerada ayaa sanadkii 1971 ahaa ninkii ugu horeeyey oo qoraal ka dira Computerkiisa u diray Computer kale isagoo isticmaalaya khadka Network, arrintaasi oo horseeday Emailka xiligan adduunka laga isticmaalo iyo Internetka fariimaha la isugu gudbiyo.
Farsamadan oo ay kadib qaateen dhamaan aaladaha fariimaha la isugu gudbiyo ee internetka iyo telefonada casriga
ninkaan ayaa sidoo kale waxuu si gaar ah u leeehay calaamda @ oo u dhexaysa serverka iyo emailka wax dirya
waxuuna yiri asagoo ka sheekeenaya sida uu calaamadaa u keenay ” waxaan aad uga raadiyay keyboard ka xaraf gaar ah oo la si ticmaali karo waxaana soo helay calaamada @ sidaas baan u qaaty”
ninkaan ayaa isku diray emailkii u horeyay oo aduunka laga diro waxuuna ka diray labo computer oo networka ahaan iskugu xiran.
nasiib xumo ninkaan aduunku uma diiwaan galin inuu asagu lahaa halabuurka internetka oo looma samayn copy right, sidaasna internetku waxuu ku noqon mid aysan cidna sheegan hal abuurkiisa.
Tomlinson ayaa ahaa 74 sano jir waxaana la sheegay in uu u dhintay xanuun dhanka wadnaha ah Sabtidii lasoo dhaafay.